2014 | ဂန္တ၀င် | Page 9
Irrawaddy ဆိုဒ်သည် ဟာသများအပြင် အခြားသော သတင်းများကိုပါ ကဏ္ဍများဖြင့် စုံလင်စွာဖော်ပြပေးသော ဆိုဒ်ဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်း ပြည်ပ သတင်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုကဏ္ဍစုံလင်စွာ ဖော်ပြသည်။ Irrawaddy ဆိုဒ်တွင် ဟာသများကို ပြည်တွင်းပြည်ပဟာသများ၊ နိုင်ငံရေးဟာသများကို ဟာသတိုလေးများ၊ ကာတွန်းကွက်များ၊ ဟာသဆောင်းပါးများ စသဖြင့်ပုံစံမျိုးစုံဖော်ပြသည်။...
Min Lwan Naung (Pantanaw) (http://waymin007.blogspot.com/)
Min Lwan Naung (Pantanaw) ဆိုဒ်သည် သတင်း၊ ဆောင်းပါး၊ ကဗျာ၊ အလုပ်သမား ဥပဒေ၊ အထွေထွေ ဗဟုသုတစာပေ၊ အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေရန် လမ်းညွှန်၊ စာအုပ်စင်၊ ပြည်သူ့စစ်သည်ရေးရာ၊ အလုပ်သမားသတင်း၊ နည်းပညာများ၊ ထိုင်းရောက် မြန်မာ အလုပ်သမားတို့၏ ရင်ဖွင့်သံ၊ မြန်မာအွန်လိုင်းရေဒီယို...
Myanmar Jokes (http://myanmarjokes.blogspot.com/)
Myanmar Jokes ဆိုဒ်သည် ကြည့်ရှုရန် မြန်ဆန်သည်။ ဆိုဒ်သည် ရိုးရှင်းစွာ တည်ဆောက်ထားသော ဆိုဒ်ဖြစ်သည်။ Myanmar Jokes ဆိုဒ်တွင် ဟာသများကို ကဏ္ဍစုံလင်စွာဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ Myanmar Jokes ဆိုဒ်သည် ကြည့်ရှုရန် မြန်ဆန်သည်။ ဆိုဒ်သည် ရိုးရှင်းစွာ တည်ဆောက်ထားသော ဆိုဒ်ဖြစ်သည်။ Myanmar...
Exodus (D.H.N) (http://exodusdhn.blogspot.com/)
Exodus (D.H.N) ဆိုဒ်သည် နည်းပညာနှင့်သက်ဆိုင်သော သတင်းများ၊ အင်တာနက်စီးဈေးကွက်၊ စတော့ရှယ်ယာ၊ ဒေါင်းလော့လုပ်ရန်များ၊ နည်းပညာများအတွက် ဘလော့တည်ဆောက်ပုံများ၊ ဘလော့အတွက်လိုအပ်သော ဆော့ဝဲများ၊ ကျန်းမာရေးစာစောင်များ၊ နိုင်ငံရေးအကြောင်းအရာများ အစရှိသဖြင့် စုံလင်စွာ ဖော်ပြထားသည်။ Exodus (D.H.N) ဆိုဒ်တွင် ဘလော့မှာ ဇယားကွက်လေးတွေ လွယ်ကူစွာ သုံးချင်ရင်၊...
Myanmar Mobile App (http://www.myanmarmobileapp.com/)
Myanmar Mobile App ဆိုဒ်သည် မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့် ပက်သက်သော သတင်းများ၊ Android နည်းပညာများ၊ IOS နည်းပညာများ၊ မိုဘိုင်းဖုန်း ဟန်းဆက် ဈေးနှုန်းများ၊ မိုဘိုင်းဖုန်းသံစဉ်များ၊ မိုဘိုင်း ဆော့ဝဲ နည်းပညာများ၊ ဟာ့တ်ဝဲ (hardware) နည်းပညာများ၊ မိုဘိုင်းဂျာနယ်များ၊ မိုဘိုင်းဖုန်း သင်တန်းများ...
Man Myo Thar (http://manmyothar.blogspot.com/)
Man Myo Thar ဆိုဒ်သည် နည်းပညာများကို ဖော်ပြပေးသော ဆိုဒ်ဖြစ်သည်။ Man Myo Thar ဆိုဒ်တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသူ ( ၁ ၇၂၃ ၆၆၀ ၀၂ ၅ ) ဦးရေရှိပြီ ဖြစ်သည်။ Man Myo Thar...
Win Kabar Kyaw (http://www.winkabarkyaw.net)
Win Kabar Kyaw ဆိုဒ်သည် ကွန်ပျူတာနှင့် အခြားနည်းပညာများကို ဖော်ပြပေးသော ဆိုဒ်ဖြစ်သည်။ Win Kabar Kyaw ဆိုဒ်တွင့် မြန်မာစာဖြင့် ရေးသားသော အိုင်တီစာအုပ်များ၊ ဂျီတော့နှင့် မြန်မာစာ ပြဿနာ၊ နည်းလမ်းများ၊ ANDROID ဖုန်းနှင့် မြန်မာ FONT၊ နေ့စဉ်...
Lu Lin Mg (http://lulinmg9wellaung.blogspot.co.uk)
Lu Lin Mg ဆိုဒ်သည် ဆော့ဝဲများ၊ နည်းပညာများ၊ နည်းပညာစာအုပ်များ၊ စခရမ် ဆေဗာများ၊ ပီစီ ဝေါပေပါများ၊ စာအုပ်များ စသဖြင့် စုံလင်စွာ ဖော်ပြထားသော ဆိုဒ်ဖြစ်သည်။ Lu Lin Mg ဆိုဒ်တွင် ဝင်းဒိုး-၈ အသုံးပြုနည်း စာအုပ်၊ ဇော်ဂျီ...
Maung Pauk (http://www.maungpauk.org)
Maung Pauk ဆိုဒ်သည် နည်းပညာဆိုင်ရာ အီးဘုတ်များ၊ နည်းလမ်းများ၊ ဆော့ဝဲများ၊ မိုဘိုင်းဖုန်းဆိုင်ရာ ဆော့ဝဲများ၊ အပီလီကေးရှင်းများ စုံလင်စွာ ဖော်ပြထားသော ဆိုဒ်ဖြစ်သည်။ Maung Pauk ဆိုဒ်တွင် အိုင်အိုအက်စ်တွင် မြန်မာစာ အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် ထည့်သွင်းခြင်း၊ ဟာဝေးဖုန်းများတွင် မြန်မာဖောင့် မှန်အောင် ပြုလုပ်နည်း၊...
Myanmar Humor (http://myanmarhumor.blogspot.com/)
Myanmar Humor ဆိုဒ်သည် မြန်မာဟာသများကို စုံလင်စွာ ဖော်ပြသောဆိုဒ် ဖြစ်သည်။ Myanmar Humor (မြန်မာဟာသဆိုဒ်)တွင် အရောင်ဖျော့များကို အဓိကထားအသုံးပြုသည်။ Myanmar Humor (မြန်မာဟာသဆိုဒ်)တွင် ဟာသနဲ့ သက်ဆိုင်သော သီချင်းများ၊ ဟာသတိုများ၊ ဟာသမတိုမရှည်များ၊ ဟာသရှည်များ၊ ဟာသဝတ္တုတိုများ စုံလင်စွာရေးသားထားသည်။ သရောစာ...
Danyawadi မြန်မာနိုင်ငံရေ ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မြန်မာဘာသာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ နှစ်မျိုးဖတ်ရှုနိုင်သည်။ ကဏ္ဍစုံလင်စွာတွေ့ရနိုင်ပါသည်။ စာပေလေ့လောလိုသူများအတွက် Danyawadi မှ အဘိဓာန်ပေါင်းများစွာ တင်ပေးထားပါသည်။ Link: http://danyawadi.wordpress.com Danyawadi Danyawadi is Burmese political website. It enables to read in both Burmese and English....
VOA News (http://burmese.voanews.com/ )
Voice of Asia (VOA) Burmese အနေနဲ့ မြန်မာသတင်း၊ နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကို တိတိကျကျ၊မှန်မှန်ကန်ကန်၊ ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ ကြိုးစားထုတ်လွှင့်ပေးနေသလို၊ VOA Burmese က သောတရှင်တို့အတွက် ဖျော်ဖြေရေး၊ ပညာပေးအစီအစဉ်တွေ အပါအ၀င် စိတ်ဝင်စားဖွယ် အစီအစဉ်များစွာကို VOA Burmese မှ တဆင့်...
Radio Free Asia (RAF) ၏ တာဝန်နှင့် ရည်ရွယ်ချက်မှာ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရများ၏ ပိတ်ပင်ဟန့် တားမှုများ ကြောင့်၊ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် မရှိသော အာရှ နိုင်ငံများမှသတင်းများကို RFA မှတဆင့် သောတရှင်များထံ၊ တိကျမှန်ကန်ပြီး၊ အချိန်ကိုက်ဖြစ်သော သတင်း နှင့် သတင်းအချက်အလက်များ ...
Hot News Weekly (http://www.hotnewsweekly.com)
Hot News Weekly သည် ပြင်ပ မှာပါ အောင်မြင်နေသော ဂျာနယ်တစ်စောင်ဖြစ်သည်။ Hot News Weekly အဓိက အရေးအသားများမှာ နိုင်ငံရေးအကြောင်းအရာ များ ပိုပြီး ရေးသားလေ့ရှိသော ဂျာနယ်ဖြစ်သည်။ Link: http://www.hotnewsweekly.com Hote News Weekly Hot News Weekly isawell-recognized journal both...
Moe Ma Ka (http://moemaka.blogspot.in)
Moe Ma Kha သည်အမေရိကန်နှင့် ပြည်ပတိုင်းပြည်များသို့ ပြောင်းရွှေ့လာကြရသော မြန်မာ စာနယ်ဇင်းသမားများ၊ မြန်မာအမျိုးသားရေး ဆောင်ရွက်နေသူများကို အခြေပြုပြီး၊ မြန်မာ စာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ အနုပညာ နှင့် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ရေးသား ပြောဆိုခွင့် တို့ တင်ပြနိုင်ရန် နှင့် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပရှိ...
Yangon News (www.ygnnews.com)
Ygn News သည် ပြင်တွင်း ပြည်ပ သတင်းစုံလင်စွာ ဖော်ပြပေးနေသော ဆိုဒ် တစ်ခုဖြစ်သည်။ Ygn News သည် ပညာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ မှုခင်း၊ နိုင်ငံရေး၊ ကဏ္ဍအမျိုးအစား စုံလင်စွာ သတင်း ဗီဒီယို ဖိုင်များနှင့်ပါ ပူးတွဲတင်ပြပေးနေသော သတင်း...
Aries (March 21st to April 19th) Travelling will keep your month busy at this time of the year around. You are highly likely to succeed...